९१ बर्षमा भैरब रिसाल, भिडियाेमा हेर्नुहाेस् ‘भैरब दार्इ’ – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ प्रमुख खबर ∕ ९१ बर्षमा भैरब रिसाल, भिडियाेमा हेर्नुहाेस् ‘भैरब दार्इ’
९१ बर्षमा भैरब रिसाल, भिडियाेमा हेर्नुहाेस् ‘भैरब दार्इ’
पुलेसो २० भदौ, २०७७, शनिबार १५:०१
दार्इ,नमस्कार अाराम छ ?
नमस्कार, म अाराम छु । तपार्इहरूलार्इ कस्ताे छ? ९१ बर्ष लाग्याे घुँडाले समस्या दिन्छ । अरू ठिक छु ।
भैरब दार्इकाे याे जवाफबाट म एकपटक पुनः झस्के । वि.सं. १९८५ सालमा भक्तपुरको गुण्डु गाविसमा जन्मिएका भैरव रिसाल पत्रकारिता क्षेत्रका लागि एक धराेहर हुन् भने नेपालकै लागि सम्पत्ति । अनामनगर उहाँकै निवासमा पुग्दा म कुनै गाँउमा पुगे जस्ताे भान भयाे । वरिपरि हरियाली । रूखहरू छेउमा बारी र बारीमा गाेडमेल भइरहेकाे दृश्य काठमाडाैं बानेश्वर अासपास मैले बिरलै देखेकाे हाे । तर अग्लाअग्ला घरहरूले भने मलार्इ भनिरहन्थ्याे ‘चिन्ता नगर केटा त काठमाडाैंमा नै छस्।’
भैरब दार्इले भित्र काेठामा बाेलाउनुभयाे । कोठा पुरस्कारले भरिभराउ । हेरिरहुँ लाग्ने । मैले शुरूमैं भन्न नसके पनि मनमा राखिसकेकाे थिए। उहाँकाे एक् तस्बिर यी प्रमाणपत्र देखिने गरि लिनुपर्छ । केही कुराकानी पछि हामी अन्तर्वार्ता लिनका लागि तयार भयाैं । मैले माेबाइलकाे क्यामेरा खाेले र कता राम्राे देखिन्छ भनेर मिलाए । म फाेटाे पत्रकार हाेइन न त मैले क्यामेरा नै चलाउछु । तर अहिलेकाे म पुस्तालार्इ सजिलाे भएकाे छ सामाजिक सञ्जालले फेसबुक र युटुबले । जे जस्ताे फाेटाे भिडियाे लिनुहाेस् । सिक्दैछु भन्ने साेच्नुहाेस् र काम गर्नुहाेस् । सके गल्ति नदाेहर्याउनुहाेस् । तर मैले अाज गल्ति दाेहर्याएकाे छु । त्याे कुरा मैलार्इ अन्तर्वार्ता/भलाकुसारी शुरू गरेकाे ६-७ मिनेट तिर थाहा हुन्छ । के गल्ति भएछ भनेर साेच्दैहुनुहुन्छ? पख्नुहाेस् है धेरैले अनुमान लगाए पनि म भन्छु । मैले मेराे फाेन हवार्इजहाज नबनाएरै उडाएकाे थिए । अर्थात् जुनसुकै समयमा पनि फाेन अाउन सक्थ्याे र कुराकानी राेक्नुपर्ने ।
अब यी कुरा छाेडेर बरिष्ठ पत्रकार, वातावरण अभियानकर्मी र एक समयका राजनीतिकर्मी रिसालकाे केही कुरा गराैं र उहाँसँगकाे कुराकानी भिडियाेमा हेराैं । वि.सं. १९८५ सालमा भक्तपुरमा जन्मनुभएका भैरब रिसालले लुभु पाठशालामा संस्कृतको प्रारम्भिक अध्ययन गरे। निम्न माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गरेपछि तीनधारा पाठशाला हुँदै बनारसबाट संस्कृतमा साहित्य र अर्थशास्त्रमा आचार्यसम्मको अध्ययन गरे।
बागमति नदिमा नुहाउने, ७७ जिल्ला घुमेका मान्छे उनकाे परिचयमा जाेडिने र उनलार्इ चिन्दा प्रयाेग हुने वाक्य हुन् । यिनले विभिन्न पत्रिका र राष्ट्रिय समाचार समिति आदिमा काम गरिसकेका छन्। यिनी नेपालमा वातावरण पत्रकारिताको अग्रज अभियानकर्ता हुन्। उनको आत्मकथा साधुलाई सूली (डायरी) र पत्नी सुशीलासँग मिलेर सुशीला भैरव (संयुक्त आत्मकथा) कृति हुन् । पत्रकारितामा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएवापत राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार, हृदयचन्द्र सिंह पत्रकारिता पुरस्कार, प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता सेनानी पत्रकारिता सम्मान तथा वातावरण पत्रकारितामा योगदान गरेवापत डब्लूडब्लूएफको अब्राहम कन्जभेसन अवार्ड, विज्ञान प्रविधि प्रवर्द्धन पुरस्कार, जगदम्बाश्री पुरस्कारलगायतका अनेकौं साना ठूला पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छ ।
नेताहरूकाे बाेलार्इ र व्यवहार नमिलेकाे र काम नगर्ने बाेल्ने मात्रै प्रवृतिले समाज विकास नहुने र जनताले दुःख पाउने उनकाे बुझार्इ छ । अाफ्नाे समयमा उनले ९ जना प्रधानमन्त्रीसँग बाक्लाे संगत गरे । पत्रकारको तलव कम भएकाले पत्रकारले यो क्षेत्रबाट मात्रै जीवन धान्न नसक्ने उहाँको बुझाइ छ । त्यो भएर पनि पत्रकारलाई विभिन्न स्वार्थ समूहले प्रयोग गर्ने गरेकाले पत्रकारिता क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ त्यसको असर देखिने गरको रिसालको बुझाई छ । ‘पहिलाको पत्रकारिताले आम जनताको बोली बोल्थ्यो, अहिलेको पत्रकारिताले विभिन्न स्वार्थ समूहको बोली बोल्छ’ रिसालले भन्नुभयो । परिस्थितिले पत्रकारिता यस्ताे भएकाे उहाँ बताउनुहुन्छ। पत्रकारितामा विश्वसनीयता गुमेकाे र याे समाजका लागि नै नराम्राे उहाँले बताउनुभयाे । वि.स. २०१३ सालमा हालखबर दैनिकबाट पत्रकारिता गर्नुभएका रिसालले नेपाल समाचार, समय दैनिक, राससमा २२ वर्ष काम गर्नुभएका रिसाल अझैपनि रेडियो सगरमाथामा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ । लामो पत्रकारितामा योगदान गर्नुभएका रिसालको कोठा पुरस्कारले भरिभराउ छ ।
भिडियाे हेर्नुहाेस् भैरब रिसाल (भैरब दार्इ) सँग गरिएकाे याे कुराकानीः